ခေတ်သစ် မဟာသင်္ကြန်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ခေတ်သစ် မဟာသင်္ကြန်စာ
Posted by ဦးသု on Jan 17, 2013 in Facebook | 15 comments
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄-ခု၊နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ( ၄ )ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၃ ခု၊ ဧပြီလ ( ၁၄ ) ရက် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ် မှ ရေပိုက် စဖွင့်ချိန်၌ မဟာသင်္ကြန်ကျ၏ ။
မဟာသင်္ကြန်ကျသောအချိန် တွင်တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းသည်ကို လက်တစ်ဖက်က ချိုးငှက်၊အခြားလက်တစ်ဖက်က ၁၂၀ မမ စိန်ပြောင်းကို ကိုင်လျှက် တိုယိုတာ ဟာရီယာကားကိုစီးလျှက် လူ.ပြည်သို. ဆင်း၏။ သုတိနန္ဒာ နတ်သမီး လည်း အလှည့်စေ့ ( လက်ညောင်း)ပြီ ဖြစ်သဖြင့် လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသော ဗြမ္မာကြီးဦးခေါင်းအား လက်ပံတောင်းတောင်ရှိရာ ဘက်အရပ်သို.လှည့်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏လက်ထဲသို.ကမ်း၏။ သုဇာဝင့်ကျော်အမည်ရှိ နတ်သမီးငယ်သည် ဇီးရိုးကွာတားဘောင်းဘီ ကိုဝတ်ကာ အိုပါးဂဏန်းစတိုင်တီးလုံးဖြင့်ကရင်း သင်္ကြန်မင်းအား ကြိုလင့်၏။
မိုးဦး၊မိုးလယ်၊မိုးနှောင်းကာလ များတွင် မိုးရွာချင်သလိုရွာအံ့၊ ဆန္ဒပြ မှုများ ထူပြောအံ့၊ ကော်မတီများ မှိုလိုပေါက်အံ့ ၊သတင်းစာအသစ်များထွက်ရှိ အံ့၊ ဂျာနယ်များအချိန်မှီ ဗျူဟာ မပြောင်းနိုင်သော် ငုတ်တုတ်မေ့အံ့ ၊
ရက်ကို လစောင့်၏။ လကို ယုန်စောင့်၏။ယုန်ကို မုဆိုးစောင့်၏။ မုဆိုးကိုတောခေါင်းစောင့်၏။မြို.တော်ခန်းမရှေ.ကို ဆန္ဒပြသူတို.စောင့်၏။ဆန္ဒပြသူတို.ကို ဗီနိုင်းထုတ်သူတို.စောင့်၏။ ရပ်ကွက်လမ်းဆုံများအားဆိုက်ကားသမားများစောင့်၏။ ဈေးဝယ်စင်တာများအား တက္ကစီများစောင့်၏။တက္ကစီများအား ယာဉ်ထိန်းရဲများစောင့်၏။ ပြည်တော်ပြန် အဆိုတော်များအား စတိတ်ရှိုးစီစဉ်သူတို.စောင့်၏။
ခြေနှစ်ချောင်းတို.၏အဓိပတိကား ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်၊ ခြေလေးချောင်းတို.၏အဓိပတိကား တောက်တဲ့၊ ငှက်တို.၏အဓိပတိကား ဟိမ၀န္တာလင်းတ ၊ဆိုင်တို.၏အဓိပတိကား ဟန်းဆက်ဆိုင် ၊ ရှိုးရွမ်းတို.၏အဓိပတိကား ကားရှိုးရွမ်း ၊စာအုပ်တို.၏အဓိပတိကား မျက်နှာစာအုပ် ဖြစ်တော့သတည်း။
ယခုနှစ်အတွက် ( ၇ )ရက်သားသမီးများအဖို. ယတြာကား….
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ – အများပြည်သူအတွက် ဟူသော အော်သံအား အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း အာခေါင်ခြစ်သံနှင့်ပြောရန်
တနင်္လာသားသမီးများ – ချီတက်ဆန္ဒပြ ပွဲများတွင် ကျီးကြည့်ကြောင်ကြည့် ကြည့်ရင်း ချိန်ကိုက်ပါဝင်ရန်
အင်္ဂါသားသမီးများ – ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများတွင် ဆုတ်လဲဆူး ၊စားလည်းရူး အိုက်တင်ဖြင့် ညီညွတ်ကြပါ…ညီညွတ်ကြပါ ဟု အော်ရန်….
ဗုဒ္ဒဟူးသားသမီးများ – ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ရောယောင် ပြီး ၀င်အရွေးခံ ခြင်းမှ ဝေးဝေးရှောင်ရန်
ကြာသာပတေးသားသမီးများ– ပြည်သူ.ဆန္ဒ ၊ တောင်းတိုင်းရ…မရလျှင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမည်ဟု ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တွင် မကြာခဏ ပြောပေးရန်
သောကြာသားသမီးများ – ဟိုပွဲ ဒီပွဲ များသို. သိသိ မသိသိ ဟိတ်တစ်လုံး ဟန်တစ်လုံး ဖြင့် သွားတက်ရန်
စနေသားသမီး များ – တတ်ယောင်ကားသမားများ နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ.လာလျှင် တတ်နိုင်သမျှ တည့်တည့်တိုးရန်
ဟိ ဟိ ဟိ…..
“”ရက်ကို လစောင့်၏။ လကို ယုန်စောင့်၏။ယုန်ကို မုဆိုးစောင့်၏။ မုဆိုးကိုတောခေါင်းစောင့်၏။မြို.တော်ခန်းမရှေ.ကို ဆန္ဒပြသူတို.စောင့်၏။ဆန္ဒပြသူတို.ကို ဗီနိုင်းထုတ်သူတို.စောင့်၏။ ရပ်ကွက်လမ်းဆုံများအားဆိုက်ကားသမားများစောင့်၏။ ဈေးဝယ်စင်တာများအား တက္ကစီများစောင့်၏။တက္ကစီများအား ယာဉ်ထိန်းရဲများစောင့်၏။ ပြည်တော်ပြန် အဆိုတော်များအား စတိတ်ရှိုးစီစဉ်သူတို.စောင့်၏။””
ဗုဒ္ဒဟူးသားသမီးများ – ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ရောယောင် ပြီး ၀င်အရွေးခံ ခြင်းမှ ဝေးဝေးရှောင်ရန်၊
ဗုဒ္ဒဟူးသမီး ဖြစ်သည့်အတွက် လိုက်နာ သွားပါမည်။
ဂေဇက်မှာ စာတွေရေးနေတာ အများပြည်သူအတွက် ကွ
” ကော်မတီများ မှိုလိုပေါက်အံ့ ”
လက်ဖျားရော ခြေဖျားရော ခါပါတယ်
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဆိုတာကြီးမှာ ဖွဘွတ်က ဖွ တာကို အရေးကြီးအဆို တင်သွင်းပြီး စုံစမ်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့ဦးမယ်တဲ့
ရွာနဲ့ ပတ်သတ်တာလဲ စုံစမ်းရေးလုပ်ဘို့ သဂျီး ဆီ အဆိုတင်သွင်း ဦး မှ
အိုပါးဂဏန်းစတိုင်ကဒဲ့ နတ်တမီးဂို ဒါ့ပုံရိုက်ပီးဒေါ့ ရွာထဲမှာ ပြန်တင်ရမယ် :harr:
အားရဝမ်းသာစွာနဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြူပြူငှာငှာ နွေးနွေးထွေးထွေး ဖက်လဲတကင်း ( )
ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန်တွေလည်းပြောပြရအုံးမယ်
မဟာဘာဂျာ အံချာဒုံး ဆိုဒဲ့လူရယ် ၊ နှဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့ မောင်ပေဆိုဒဲ့လူဒွေကိုဒေါ့ဖြင့်
ဝေါင်ဝေါင်ရွှေးလို့ ဝေးဝေးရှောင်စေချင်တယ်…. ကျန်တေးဒယ် အူးမာဂဆိုဒဲ့လူဂျီး
သူတို့ကိုရှောင်နိုင်ရင်တော့ဖြင့် တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာစွာနဲ့ ခလုပ်မထိ ဆူးမငြိဘဲ
ဥဥလေးနဲ့ ပေါင်း… အဲ့လေ………
ရွာထဲမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ :harr:
ဟဲ့ … ဘဲဥ ..
ဟိုမှာ နင့်မယားဂျီး ခေါ်နေဒယ် …
လက်ထဲမှာလည်း တုတ်ဂျီးနဲ့ …
နင် အတွက်ဒေါ့ မျင်ယောင်ဒေးးး
ဟဲ့ ဟဲ့ ဟိုမှာ နင့်မိန်းမလည်း နင့်ဂိုစိတ်မချလို့ လိုက်လာနေဘီ
ဝစစ်တပ်ကြတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ပြောလကွာ…..
ဖွဘုတ် မှာလည်း ရှာဖွေကြည့်
ထိုကြောင့်ပင် တိရစ္ဆာန်သေးသေးလေးတစ်ကောင်ဟုသာသတ်မှတ်မိသောကြောင့် ပြန်မပြောမိ ဟိဟိ
သင်္ကြန်စာမှာ စာကျန်သွားပါတယ် ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ အာဏာရူးကြီး တစ်ကယ်ပင်ရူးသွားအံ့ တဲ့။ ဖြည့်ဖတ်ဖို့ပါ
မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမည် …မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမည် ..
ကဲ ကြေပီကွာ .. လက်ပံတောင်းတောင်မှာ … :harr: